Xafiisyada Qurbajoogta Deegaanada iyo Wasaarada Arimaha Dibada - Cakaara News
Xafiisyada Qurbajoogta Deegaanada iyo Wasaarada Arimaha Dibada
Jigjiga(CN) Talaado, 15kii September 2015,Wuxuu shir uga furmay xarunta dalka ee Addis ababa xafiisyada qurbajoogta ee deegaanada dalka iyo wasaarada arimaha dibada ee JDFI oo kaashanaysa African Diaspora policy center. Shirkan oo socon doona mudo dhawr maalmood ah ayaa waxaa diirada lagu saari doonaa nidaamkii loo fuliyay qorshayaashii sanadkii hore iyada oo si qoto dheera loogu falanqayn doono hirgalinta qorshaha 2008TI. taasi oo ay xafiisyada deegaanadu ka soo jeedin doonaan warbixinta ku aadan hirgalinta qorshahaasi iyo habraacyada fulineed ee ay u marayaan.
Hadaba waxaa shirkan deegaankeena ugu qaybgalay Wasiirka Xafiiska Xidhiidhka Qurbajoogta mudane Cabdibari Maxamed Macalin oo u sheegay shabakada wararka ee cakaaranews in shirka laga soo jeedin doono warbixinta qorshaha 2008TI ee xafiiska taasi oo ku qotonta xoojinta iyo dar dargalinta xidhiidhka qurba joogta iyo fahan siinta doorka ay ku leeyihiin hirgalinta hayaanka horumarineed ee u yaala guud ahaanba dalka iyo waliba deegaankaba.
Isku soo wada duuboo, Xafiiska qurbajoogta DDSI iyo qurbajoogta udhalatay deegaanka ayaa inta badan marka ay wasaarada arimaha dibadu u qabato shirar noocan oo kale ah waxaa mar kasta lagu amaanaa deegaankeena in ay yihiin hormuud kudayasho mudan oo tusaale wanaagsan u noqonaya guud ahaanba deegaanada kale ee dalkeena.